/ ngwaahịa / Ọgwụ PCT / Toremifene (89778-26-7)
SKU: 89778-26-7. Category: Ọgwụ PCT
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Toremifene (CAS 89778-26-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Toremifene ntụ ntụ, Ọgbọ mbụ nke na-abụghị nke na-ahọpụta estrogen receptor modulator (SERM) nke a na-ejikọta na tamoxifen. Dịka ụbụrụ, ọ bụ agonist estrogen maka ọdịdị anụ na cholesterol metabolism kama ọ na-emegide mammary na anụ ahụ uterine.
Toremifene isi Characters
Molekụla Formula: C26H28ClNO
Ọbara arọ: 405.96
Nchekwa Nche: 25 Celsius C (77 F F)
agba: White-to-Off-White Solid
Toremifene (89778-26-7) iji mee ihe na steroid steroid
Toremifene (89778-26-7), aha ya bụ Fareston.
Ụdị nke FARESTON bụ 60 mg, otu ugboro kwa ụbọchị, okwu ọnụ. A na-aga n'ihu na-agwọ ọrịa ruo mgbe ọganihu ọrịa dị.
Ịdọ aka ná ntị na Toremifene
Nweta enyemaka ahụike mberede ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nrịba ama nke mmeghachi omume na-adịghị mma: hives; ume iku ume; ịba ihu gị, egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ akpịrị. Ọbụna Toremifene (CAS 89778-26-7) nwere ike ime ka ọgba aghara obi na-egbu ndụ.
Toremifene bụ ihe ndị na-emeghị ka ọ bụrụ ihe dị na trihenylethylene. Toremifene na-ejikọta ndị na-anabata estrogen ma nwee ike itinye estrogenic, antiestrogenic, maọbụ ọrụ abụọ ahụ, dabere na oge ọgwụgwọ, ụdị anụmanụ, okike, akụkụ echetara, ma ọ bụ nhọrọ akara ahọpụtara. A na-ekwenye na mmetụta Titnifene (89778-26-7) na ọrịa cancer ara na-abụkarị n'ihi mmetụta ya nke antiestrogenic, na okwu ndị ọzọ, ikike ya ịlụ ọgụ na estrogen maka ebe nrụọrụ weebụ dị na cancer, igbochi mmetụta na-akpali akpali estrogen na tumor. Toremifene nwekwara ike igbochi uto tumo site na usoro ndị ọzọ, dị ka ịmepụta apoptosis, ụkpụrụ nke okwu oncogene, na ihe ndị na-eto eto.
Esi zuta Toremifene si AASraw
1 nyochaa maka Toremifene (89778-26-7)
Toremifene ntụ ntụ bụ ihe ọmụma